Voaporofo! Ny coronavirus vaovao dia mety hovonoin'ny taratra ultraviolet amin'ny taona 30. 99,9%
Novonoina tamim-pahombiazana ilay tantara an-tsary coronavirus (COVID-19) tamin'ny taona 30 tany amin'i Seoul Viosys sy SETi tany Seoul, Korea, izay nambaran'i Violeds SETi. Ny drafitry ny fitsaboana pnemonia virus coronaavirus (andrana fitsapana 7) dia navoakan'ny filankevi-pirenena momba ny fahasalamana ary nanipika fa ny taratra ultraviolet dia afaka ...
Voaporofo! Robot famonoana otrikaina pulse dia afaka mampihetsika coronavirus vaovao
Mihanaka erak'izao tontolo izao ilay virus coronavirus vaovao, izay mandrahona mafy ny fiarovana sy ny fahasalaman'ny zanak'olombelona. Ankoatry ny famonoana otrikaretina mahazatra, misy fomba haingana sy mahomby kokoa hamonoana ny virus coronavirus vaovao? Ny teknolojia famonoana otrikaina dia voaporofo fa afaka mamono ny MRSA ...
Fikarohana farany: ny coronavirus vaovao dia mety ho velona amin'ny endrik'ilay sarontava mandritra ny 7 andro! Ilaina ny famonoan-tena isan'andro
Ny coronavirus vaovao dia navoaka tao amin'ny lancet avy amin'ny Stability of SARS-CoV-2 amin'ny toe-javatra iainana samihafa tato ho ato. Asehon'ny gazety fa ny fe-potoana iainan'ny coronavirus vaovao dia mety hahatratra hatramin'ny 7 andro ivelan'ny saron-tava, ary ny virus dia miorina amin'ny sanda pH isan-karazany amin'ny hafanan'ny efitrano ...